Morning Update: Justice League oo subaxaan cagta mariyay filimada Tumhari Sulu iyo Aksar 2! | Filimside.net
Home » Box Office » Morning Update: Justice League oo subaxaan cagta mariyay filimada Tumhari Sulu iyo Aksar 2!
Morning Update: Justice League oo subaxaan cagta mariyay filimada Tumhari Sulu iyo Aksar 2!
Labada filim ee Hindiga ah Tumhari Sulu iyo Aksar 2 ayaa si aad u liito ku furmeen subaxaan waxaana xusid mudan in Tumhari Sulu uu yara roon yahay kaasi oo 8% ilaa 10% ku furmay.
Aksar 2 waa qaybta labaad filimkii Aksar ee sanadii 2006 guuleestay kaasi oo qarashkiisa yaraa meelo koobana laga daawaday waana qalad mashruuc 11-sano ka hor Hindiya oo dhan ka gadmin in qayb labaad laga sameeyo waana sababta keentay in Aksar 5% ka hoose uu subaxaan ku furmay sida shabakada Boxoffice India soo daabacday!
Tumhari Sulu waa filim dadka reer magaalka ah loogu tala galay hadii maanta gelinka dambe uu sare u kac sameeyo sidoo kalena maal maha sabtiga iyo axada ganacsi adag la imaado rajo ayaa laga qabi karaa inuu Boxoffice-ka galaan gal ku yeesho.
Dhinaca kale filimka Hollywood-ka ah Justice League ayaa si heer sare ah gudaha Hindiya kaga furmay oo ah 50% ilaa 55% xitaa filimada waa weyn sanadkan Bollywood-ka sameeyeen intooda bada sidaan heerka sare ah kuma furmin.
Justice League ganacsigiisa waxaa ragaadin karo in filimkaan luqadaha Hindi, Tamil iyo Telugu aan lagu codeynin madaama waqti ahaan kasii dib dhacay in gudiga filimada faaf reebaan daawadaan sidoo kalena shahaado siiyaan sidaa darteed Af Ingiriis oo kaliya ayaa lagu daawanayaa subaxaan.
Waxaa Aqrisay 600
One Response to Morning Update: Justice League oo subaxaan cagta mariyay filimada Tumhari Sulu iyo Aksar 2!
Pro Zakariye Mersal Mala Turjumay Flimkan Waa Sugi la anahay Tasna Waxa Sabab u ah Flimka Inta an dawan Ba shekadiisa Nala wadagtan